OST ilaa Beddelaha PST. Beddel OST ilaa PST.
DataNumen Exchange Recovery waa ugu fiican OST beddelka PST iyo OST qalab kabashada adduunka. Markay musiibo ku dhacdo Microsoft Exchange server, sida shilalka serverka, musuqmaasuqa keydka macluumaadka, iwm., DataNumen Exchange Recovery isticmaali kartaa teknoolojiyad casri ah si loo baaro aaladda agoonta ama musuqmaasuqa galka qadka ka baxsan (.ost) faylasha kombiyuutarka macmiilka, soo ceshano fariimaha boostada iyo dhamaan waxyaabaha kale ee akoonkaaga Exchange inta ugu badan ee suuragalka ah, una beddel faylasha Outlook pst si ay u fududaato.
Fiiro gaar ah: Wixii dayactirka iyo soo kabashada faylka ah 'Outlook PST', fadlan isticmaal DataNumen Outlook Repair.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,521 cod)
maxaad DataNumen Exchange Recovery?
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee ah OST soo kabashada iyo OST alaabta beddelka PST. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen Exchange Recovery leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, aad uga fiican tartamayaasha kale ee suuqa ku jira!
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen Exchange Recovery sigaar cabaya tartanka
Soo kabashada barnaamijkaaga Exchange waa mid la yaab leh oo u shaqeeya sida shaambada. Mahadsanid.
Waxaa laga yaabaa 9th, 2020
DataNumen qalabku si fiican buu u shaqeeyey, wuxuu qabtay hawshii aan ugu baahnaa inay qabato. A + Product waad mahadsantahay
Waxaan jeclaan lahaa inaan aad kuugu mahadceliyo inaad suurta galisay inaad soo ceshato sanduuqa emaylka ee aad horay u tixgelisay lost, oo leh Dib u soo kabashada DataNume
Waxaan jeclaan lahaa inaan aad kuugu mahadceliyo inaad suurta galisay inaad soo ceshato sanduuqa emaylka ee aad horay u tixgelisay lost, oo ay la socoto barnaamijka DataNume Exchange Recovery.
Hambalyo u dir DataNumen Kooxda!
Waxaan kaliya rabay inaan idhaahdo waad ku mahadsan tahay bixinta barnaamijkan. Kaliya waxaan u isticmaalay inaan si guul leh ugu badalo wax weyn OST faylka kaas oo ii oggolaanaya inaan ka soo kabsado
Waxaan kaliya rabay inaan idhaahdo waad ku mahadsan tahay bixinta barnaamijkan. Kaliya waxaan u isticmaalay inaan si guul leh ugu badalo wax weyn OST feyl kaas oo ii oggolaanaya inaan ka soo kabsado 150 emayl oo la waayey.
Waxay qabatay shaqo weyn, waanan ku faraxsanahay.
Aad ayaad u mahadsantahay. Waxaan rajeynayaa inaad heysatoost maalin aad u fiican, iyo isbuuc dhammaad ah !!
Waxaa laga yaabaa 10, 2019
By habka, aad ayaan u qadarinaynaa caawintaada. Waxaan qaadanay go'aanka iibsiga Datanumen Exchange Recovery qalab shalay, iyo mid ka mid ah waxyaabaha aan ku saleynay
By habka, aad ayaan u qadarinaynaa caawintaada. Waxaan qaadanay go'aanka iibsiga Datanumen Exchange Recovery qalab, shalay, iyo mid ka mid ah waxyaabaha aan ku salaynay go'aankeennu wuxuu ahaa adeegga farsamo ee aad u fiican ee aad bixisay intii aan tijaabinaynay.
Qalabkani wuxuu ahaa mid waxtar leh! Waxaan isku dayay barnaamij kale oo la mid ah laakiin kani wuxuu sameeyaa khiyaanada dib u soo kabashada DHAMMAAN e-maylkeyga OST gudbiso.
Waxaa laga yaabaa 20, 2019
Waxaan kaliya rabay inaan iraahdo idinka ayaa ugu fiican ...
Aad baad u qaddarinaysaa! Hadda waxaan ka heli karaa macluumaadka jadwalkayga jaangooyooyin khaldan OST (waa inuu lahaadaa
Aad baad u qaddarinaysaa! Hadda waxaan ka heli karaa macluumaadka jadwalkayga jaangooyooyin khaldan OST (waxay ahayd in macluumaadka taariikheed loo kala qaybiyo pst halkii lagu soo dari lahaa ost)
Mar labaad waad mahadsantahay oo maalin wanaagsan ayaad leedahay!
Adigu waad badbaadinaysaa maalintayda. Waxkasta oo aan ubaahanahay - kaliya inaan badalo 2 OST faylasha Kaliya barnaamijkaaga ayaa sidan sameeya. Aad baad u mahadsantahay!
Tani waa qayb weyn oo software ah. Waxay soo kabsatay jab OST faylka markii ugu horaysay ka dibna markii ugu horaysay laga furay Muuqaalka 2019. Waxaan isku dayay 3 kale
Tani waa qayb weyn oo software ah. Waxay soo kabsatay jab OST faylka markii ugu horaysay ka dibna markii u horaysay laga furay Muuqaalka 2019. Waxaan isku dayay 3 qaybood oo kale oo ah qalabka dayactirka iyada oo aan lagu guuleysan oo waxaan ku sigtay inaan aqbalo boostadii hore oo ahayd lost. Mahadsanid tuulmo DataNumen! 😊
ex CIO, oo hadda hawlgab noqday
Badeecadaadu waxay sameysay wixii ay ahayd inay sameyso oo dhan. Soo kabashada feylkayga xogta e-maylka ayaa i badbaadiyey.
Waxaan kula talin doonaa alaabtaada qof kasta oo u baahan
Waxaan kula talin doonaa badeecadaada qofkasta oo u baahan, waana hubaal hadaan u baahanahay, dib ayaan u rakibayaa.
Ka dib badalkeyga PC-ga shaqsiyeed, waxaan ubaahanahay inaan ka soo kabto adeegsiga shaqsiyadeed faylki hore ee UST oo u badalay PST. Waxaa ka mid ah softwares badan, waxaan qabaa
Ka dib badalkeyga PC-ga shaqsiyeed, waxaan ubaahanahay inaan ka soo kabto adeegsiga shaqsiyadeed faylki hore ee UST oo u badalay PST. Waxyaabo badan oo softwares ah, waxaan kahelay DEXR.EXE oo si sax ah ula jaan qaaday ujeedadayda. In kasta oo UI-du ay u muuqato mid aad u fudud, DEXR waxay awood u yeelatay inay soo ceshato dhammaan e-maylkeyga, xiriirada iyo kooxaha lala xiriiro oo aan khaladaad lahayn. Si fiican ayaan maskaxda ugu hayaa DATANUMEN mustaqbalka sida tixraac Brand ah soo kabashada xogta.
In kabadan 10 saacadood oo waqti firfircoon aan lumiyay si aan u baro MS dhibaatada ay tahay markii aan kor uqaaday Muuqaalkayga 2010 ilaa 2013 iyo isbadalka
In kabadan 10 saacadood oo firfircoon kadib waxaan lumiyay si aan wax u baro MS waxa dhibaatadu tahay markii aan kor uqaaday aragtidayda Muuqaalka 2010 ilaa 2013 iyo iskudhaca isdabajoogga.ost faylashii aan aakhirkii iska daayay. markay ii sheegeen ma furi karaan asalka.ost faylka Ka dib waxaan helay fikrad dhalaalaysa oo aan ku sameeyo baaritaan deg deg ah.ost beddelka .pst iyo boom - 3.8GB xog aad ii qiimo badan ayaa gacmahayga ku soo noqday - waxaas oo dhan ka dib markii taageerada heerka sare ee MS ee shirkadda Outlook ay sheegeen inaysan waxba qaban karin. Waan ka fogaa geek kombiyuutarka laakiin markaad wax ka ogaato wax ka badan tiknoolajiyada taageerada tiknoolajiyada waa inaad si dhakhso leh u ogaataa inaad dhibaato ku jirto. Way shaqeysaa ...
RJ Collins Aasaasihii V360
Waxaa laga yaabaa 15th, 2015
Xalka Raacaya Khaladaadka Caadiga ah iyo Dhibaatooyinka Isdhaafsiga OST file
Isweydaarsigu wuxuu hadda ku jiraa Xaaladda Soo-kabashada
Khaladaadka la ogaan lahaa Faylka
Faylka Faylku maahan Fayl aan Khadka Toosnayn
Adkeysey OST Dhibaatada Faylka
Tirtir walxaha Sarrifka qalad
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Exchange Recovery v8.5
Isweydaarsiga Taageerada 5.0 illaa 2019.
Taageer Muuqaalka 97 illaa 2019 iyo Muuqaalka Xafiiska 365.
Taageerada OST faylasha uu abuuray Exchange ActiveSync.
Taageerada Windows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 iyo Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019. Nidaamyada hawlgalka ee 32bit iyo 64bit labadaba waa la taageeraa.
Taageero inuu ka soo kabsado farriimaha boostada, fayl, posts, kalandarka, ballamaha, codsiyada kulanka, xiriirada, liisaska qeybinta, howlaha, codsiyada shaqada, joornaalada iyo qoraalada ku jira OST faylasha Dhammaan guryaha, sida mawduuca, laga bilaabo, laga bilaabo, cc, bcc, taariikhda, iwm, waa la soo helay.
Taageero si loo soo cesho walxaha gundhigga ah, sida fariin kale, Waraaqaha Excel, Dukumiintiyada Erayga, iwm.
Waxyaabaha la soo helay ayaa la keydiyay oo loo rogay faylalka shakhsi ahaaneed (PST) faylalka ay si fudud u heli karaan Microsoft Outlook iyo macaamiisha kale ee ku habboon.
Taageer inuu ka soo kabto walxaha la tirtiray ee sanduuqa isweydaarsiga, oo ay ku jiraan farriimaha boostada, galka, posts, kalandarka, ballamaha, codsiyada kulanka, xiriirada, liisaska qeybinta, howlaha, codsiyada shaqada, joornaalada iyo qoraalada.
Taageero si loogu beddelo OST faylasha PST si dhakhso leh oo hufan.
Taageero si loo soo kabsado 2GB weyn OST files.
Taageero soo kabasho OST faylasha sida ugu ballaaran ee 16777216 TB (ie 17179869184 GB).
Taageero inuu ka soo kabsado lambarka sirta ah OST feylasha, labadaba sireed laysku kicin karo iyo codbixinta sare (ama sirta ugu fiican) waa la taageeray. The OST faylka waa la soo celin karaa xitaa haddii aadan haysan lambarka sirta ah.
Taageero si loo soo saaro faylka go'an ee PST ee qaabka Muuqaalka 97-2002, qaabka Muuqaalka 2003-2019, iyo muuqaalka Muuqaalka Office 365.
Taageero soo kabasho OST Xogta faylka laga soo qaaday faylasha VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ee aan waxyeelo gaarin (*. vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) files (*. vhd), Acronis True Image files (*. tib), Norton Ghost faylasha (*. gho, * .v2i), Windows NTBackup faylasha (*.bkf), Faylasha muuqaalka ah ee ISO (*. Iso), Faylasha sawirka Disk (*. Img), Faylasha muuqaalka CD / DVD (*. Bin), Khamriga 120% Muraayada Disk Faylka (MDF) feylasha (*. Mdf) iyo faylasha sawirka Nero (* .nrg).
Taageero lagu dayactirayo laguna beddelayo OST faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero lagu dayactirayo loona beddelayo qayb ka mid ah OST files.
Taageero si loo helo oo loo xusho OST faylasha lagu hagaajinayo kombiyuutarka macmiilka.
Taageero si loo badbaadiyo faylka PST ee la soo helay meel kasta, oo ay ku jiraan shabakadaha kuxiran shabakada ee kombiyuutarka maxalliga ahi aqoonsan yahay.
Taageerada isdhexgalka ee Windows Explorer, markaa waad dayactiri kartaa OST ku fayl garee liiska macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen Exchange Recovery si loogu beddelo OST faylasha PST
Markay musiibo ku dhacdo Microsoft Exchange server, sida shilalka serverka, musuqmaasuqa keydka macluumaadka, iwm, galka isweydaarsiga khadka toosan (ost) Faylasha kombiyuutarka macmiilka wali waxay kujiraan fariimaha boostada iyo dhamaan waxyaabaha kale ee kujira xisaabtaada boostada Exchange. Waad isticmaali kartaa DataNumen Exchange Recovery si loogu badalo OST faylasha faylasha PST si xogta gudaha faylasha looga heli karo Microsoft Outlook.
Intaa waxaa dheer, markaad la kulanto khaladaad iyo dhibaatooyin kala duwan OST faylasha, sida musuqmaasuqa xogta, khaladaadka iswaafajinta, tirtirka emaylka si qalad ah, 2GB weynaaday OST dhibaatada faylka, iwm, marwalba waad isticmaali kartaa DataNumen Exchange Recovery inuu ka soo kabsado xogta ka OST faylasha oo u beddelo qaabka PST.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan badalin OST Fadlan la soco DataNumen Exchange Recovery, fadlan xir barnaamij kasta oo kale oo marin u heli kara ama wax ka beddeli kara OST faylka. Sidoo kale fadlan xiro Microsoft Outlook.
Xulo OST faylka la beddelayo:
Waad ku dari kartaa OST si toos ah magaca faylka ama guji kan badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad u hesho OST faylka loo rogo kombiyuutarka deegaanka.
Haddaad taqaan nooca Muuqaalka isha OST faylka la hagaajinayo, ka dib waxaad ku cayiman kartaa sanduuqa iskujira agtooda sanduuqa wax ka beddelka faylka, qaababka suuragalka ah waa Muuqaalka 97-2002, Muuqaalka 2003-2010, iyo Muuqaalka 2013-2019 / Office 365. Haddii aad uga tagto qaabka "Awood Go'an", markaa DataNumen Exchange Recovery iskaan isha OST faylka si loo go'aamiyo qaabkiisa si otomaatig ah. Hase yeeshe, tani waxay qaadan doontaa waqti dheeri ah.
DataNumen Exchange Recovery wuxuu keydin doonaa xogta la baddelay feyl cusub oo ah qaabka Muuqaalka PST si aad ugu isticmaali karto Microsoft Outlook inaad ku furto oo aad ku aragto walxaha la beddelay. Iyo asal ahaan, magaca faylka cusub waa xxxx_recovered.pst, halkaas oo xxxx uu yahay magaca isha OST faylka. Tusaale ahaan, il ahaan OST Faylka Isha.ost, faylka asalka ah ee la beddelay wuxuu noqon doonaa Source_recovered.pst. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Waxaad ku soo qori kartaa magaca faylka la beddelay si toos ah ama guji kan badhanka si aad caleenta iyo xulo feylka la beddelay.
Waxaad ku dooran kartaa qaabka feylka PST ee la beddelay sanduuqa combo agtooda sanduuqa wax ka beddelka faylka la beddelay, qaababka suurtagalka ah waa Muuqaalka 97-2002 iyo Muuqaalka 2003-2019 / Office 365. Haddii aad uga tagto qaab ahaan "otomaatig Go'an", markaa DataNumen Exchange Recovery wuxuu soo saari doonaa feylka PST ee la beddelay ee la jaan qaadaya Muuqaalka lagu rakibay kombiyuutarka maxalliga ah.
Click ah batoonka, iyo DataNumen Exchange Recovery doonaa starka beddelashada isha OST faylka faylka PST. Bar horumarka
Kadib geedi socodka beddelka, haddii xog kasta si guul leh loogu rogi karo, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
Hadda waxaad ku furi kartaa faylka PST ee la beddelay Microsoft Outlook oo aad arki kartaa walxaha la beddelay. Fadlan ogow DataNumen Exchange Recovery wuxuu isku dayi doonaa inuu walxaha la beddelay galiyo faylkooda asalka ah. Si kastaba ha noqotee, loogu talagalay lost & walxaha la helo, waa la soo ceshan doonaa waxaana lagu ridi doonaa faylal gaar ah sida Recovered_Group1, Recovered_Group2, iwm
DataNumen Exchange Recovery 7.8 waxaa la sii daayay Diseembar 10, 2020
DataNumen Exchange Recovery 7.6 waxaa la sii daayay Oktoobar 31th, 2020
DataNumen Exchange Recovery 7.5 waxaa la sii daayay Ogosto 19th, 2020
Ka tirtir waxyaabaha aan waxtarka lahayn.
DataNumen Exchange Recovery 7.2 waxaa la sii daayay Juun 21th, 2020
Hagaajinta iswaafajinta nooca 64bit.
DataNumen Exchange Recovery 7.1 waxaa la sii daayay Febraayo 8th, 2020
Yaree xusuusta loo adeegsaday geeddi-socodka soo-kabashada.
DataNumen Exchange Recovery 6.9 waxaa la sii daayay Oktoobar 3th, 2019
Hagaajinta shaqada raadinta.
DataNumen Exchange Recovery 6.8 waxaa la sii daayay Luulyo 8th, 2019
Ka tirtir khilaafaadka ku jira faylka PST ee go'an.
Naqshadeynta mishiinka soo kabashada Dufcaddii.
Taageero si loo kaydiyo qormada soo kabashada
DataNumen Exchange Recovery 6.5 waxaa la sii daayay Janaayo 24th, 2019
Taageerada Server Sarrifka 2019 iyo Muuqaalka 2019.
Si toos ah uga saar waxyaabaha aan waxtar lahayn.
Hagaajinta saxnaanta soo kabashada.
DataNumen Exchange Recovery 6.0 waxaa la sii daayay Nofeembar 12th, 2018
Hagaajinta dib u soo kabashada faylasha weyn.
Bixi kontaroolo badan oo ku saabsan qoraalka soo kabashada.
DataNumen Exchange Recovery 5.6 waxaa la sii daayay Sebtember 21th, 2018
DataNumen Exchange Recovery 5.5 waxaa la sii daayay Abriil 28, 2018
Taageer Server Server 2016, Muuqaalka 2016 iyo Office 365.
Hagaajinta waxqabadka nooca 64bit.
DataNumen Exchange Recovery 5.0 waxaa la sii daayay Luulyo 29th, 2015
Taageer Muuqaalka 64bit.
Taageero si loo soo celiyo jajabyada xogta aan ansax ahayn.
Taageero si loo xakameeyo in laga soo kabsado tirtiray, qarsoon ama lost iyo alaab la helay.
Taageero si loo xaliyo "Ma guuri karo walxaha" qaladka OST files.
DataNumen Exchange Recovery 4.5 waxaa la sii daayay 12 Juunyo 2014
Taageero soo kabashada Muuqaalka 2013 OST files.
DataNumen Exchange Recovery 4.0 waxaa la sii daayay 29-dii Abriil, 2014
Taageero soo kabasho OST Xogta faylka ee faylasha aan waxyeello lahayn ama waxyeello gaadhay ee VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) (* .vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) files (* .vhd), Acronis True Image files (* .tib), Norton Ghost faylasha (* .gho, * .v2i), Windows NTBackup faylasha (*.bkf), Faylasha muuqaalka ah ee ISO (* .iso), Faylasha sawirka Disk (* .img), Faylasha muuqaalka CD / DVD (* .bin), Khamriga 120% Muraayada Disk Faylka (MDF) faylasha (* .mdf) iyo faylasha sawirka Nero (* .nrg).
DataNumen Exchange Recovery 3.5 waxaa la sii daayay Janaayo 20, 2014
DataNumen Exchange Recovery 3.0 waxaa la sii daayay 12 Ogosto, 2010
Hagaajinta waxqabadka mashiinka soo kabashada.
Hagaajinta ogaanshaha qaladka iyo habka farsamaynta.
Hagaaji baarka horumarka si aad ugu muujiso horumarka soo kabashada si sax ah.
Taageer Microsoft Exchange 2010 iyo Muuqaalka 2010.
DataNumen Exchange Recovery 2.5 waxaa la sii daayay Maarso 24, 2010
Hagaajinta iswaafajinta GUI.
DataNumen Exchange Recovery 2.0 waxaa la sii daayaa 29da Diseembar, 2008
Dib u qor arjiga oo dhan.
Taageer Microsoft Windows Vista.
Taageer Microsoft Outlook 2007 iyo Exchange 2007.
Dayactir cilladaha ka shaqeynaya farriimaha waaweyn.
DataNumen Exchange Recovery 1.1 waxaa la sii daayay Nofeembar 10, 2006
Taageer hababka soo kabashada ee dhowr ah.
DataNumen Exchange Recovery 1.0 waxaa la sii daayay 1-dii Janaayo, 2006
Qalab awood leh si loo soo celiyo agoonta ama musuqmaasuqa Microsoft Exchange kaydinta qad la'aanta (.ost) faylasha
Soo kabasho lost Xogta Muuqaalka, oo ay ku jiraan emayllada iyo walxaha kale ee ka imanaya cajaladaha ceyriinka ama dirawalada